Ingane isivele izalwa, futhi izitho zayo nezinhlelo zisathuthuka. Uma ukuthuthukiswa kwengqondo kwengane kuletha abazali injabulo nokuqhosha, ukuvuthwa kwesimiso sokugaya ukudla ngezinye izikhathi kuyanezela ekuhluphekeni. Emgqatsheni wezinsana ezisanda kuzalwa akukhona okwanele okuthiwa ama-bacteria amahle asiza ukugaya nokufanisa ukudla. Ngokuvamile ingane ihlushwa yi-colic, i-bloating, isifo sohudo, noma ukuqotshwa. Ingane ayilali kahle futhi ilele, ivame ukukhala, unenkinga ngesitokisi.
Isimo esifanayo singavela ngemva kokuthatha imithi yama-antibiotics, ngoba yaziwa ukuthi ngaphezu kwe-pathogenic, ibhubhisa i-flora evamile yamathumbu, eqinisekisa ukuthi umsebenzi wayo ugcwele. Kulokhu, isidumbu somntwana sidinga ukwesekwa okuvela ngaphandle. Isidakamizwa bifiform yezingane ezisanda kuzalwa asikwazi ukuba ngcono.
Izinkomba eziyinhloko zokusetshenziswa kwe-bifiform - dysbacteriosis kwanoma imuphi umsuka (i-colitis, i-gastroenteritis, imiphumela ye-antibiotic kanye ne-sulfonamide yokwelashwa). I-bifiform nayo inqunyelwe ukuvimbela ukuphazamiseka kwamathumbu, izifo ezingapheli zesimiso sokugaya ukudla, ukubekezeleleka kwe-lactose, i-dyspepsia, flatulence nokusekela ukuzivikela kwengane.
Ukuze lula i-bifiform baby ikhishwe ngesimo samathebulethi ahlaziyekayo, ukumiswa, i-powder kanye namaconsi. Umama angakhetha uhlobo olufanele kakhulu lomuthi, egxile eneminyaka yengane. Ngakho, amaphilisi anqunyelwe izingane ezineminyaka emibili ubudala. Ngaphambi kokuba unikeze i-bifiform, kufanele uqiniseke ukuthi ingane ingathatha amaphilisi. Uma kukhona ukungabaza, kungcono ukugaya ithebulethi bese uyixuba nokudla. Izinga eliphakanyisiwe le-bifiform yiziphilisi ezimbili ngosuku. Kumele uqaphele ukuthi amaphilisi okuhlakulela azinyane lezinyane lezinyane elinamantombazane ane ukunambitheka kwezingane zase-orange priayayut ngokuzithandela kakhulu. Kubantwana abaneminyaka engama-1 ubudala, kulula kakhulu ukuthatha i-bifiform baby powder emaceleni. Kulesi simo, indlela yokusebenzisa i-bifiform ihlala isilingana: ichitha okuqukethwe kwesikhwama ebhodleleni ngenhlanganisela noma ubisi obonisiwe, unike umntwana kabili ngosuku isaka elilodwa.
Kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila, ungasebenzisa i-bifiform ngezinsana ngendlela yokumiswa. Ukuze uvuselele uhlelo lokugaya, ibhodlela elilodwa ngosuku lanele ezinsukwini eziyishumi kuya kwezinsuku ezingamashumi amabili. Azikho ubunzima bokuthi ungayifaka kanjani ingane ye-bifiform ngaphambi kokuba uyinike ingane esanda kuzalwa. Kwanele ukugoqa isembozo sebhodlela kancane futhi okuqukethwe kwalo kuzoba ngamafutha. Khona-ke kufanele ushukumise ibhodlela kancane bese umuthi ulungele ukusetshenziswa. Imithetho eqinile yokuthi ungathatha kanjani i-bifiform baby, cha, ngakho-ke ungayinika ngaphambi, nangesikhathi, nangemva kokudla. Nakuba amacala we-bifiform overdose engakaqopwanga, ungadluli umthamo okhonjisiwe kusichasiselo kumuthi. Olunye uhlobo lwalesi sondlo sokudla kukhona amaconsi we-bifiform baby, okungahle futhi kuqokwe kusukela ngosuku lokuqala lokuphila. Amaconsi ahle kakhulu kubantwana abenqaba ukugwinya amaphilisi, ama-capsules. Kwanele ukushayela ingane emlonyeni ngenani elidingekayo lamaconsi, kanti nehochuha encane yena uyozigwinya.
I-bifiform baby ayinayo imikhiqizo yokwelapha. Kuyinto yokwengeza okusebenzayo okuphilayo okungeziwe ekudleni. Iqukethe inhlanganisela yamavithamini anenzuzo namagciwane emzimbeni. Bifiform yakhelwe ukucabangela izidingo zomzimba wengane. Kokuphikisana okungaqaphelwa kuphela ukubekezelelana komuntu siqu kwezakhi zomuthi, okuyinto engavamile kakhulu. Kungathathwa ngesikhathi sokukhulelwa, nangesikhathi sokukhulelwa.
Amathebhu amaningi wezingane
Amazinyo Ophthalmic In Children
Ingane inekhwehlela nomkhuhlane
Ingane incishiswa nge-hematocrit
Izifo ezithathelwanayo ezinganeni
Ingane njalo khykaet - yini okufanele uyenze?
Hpel for the newborns
Isifo sohudo emantwaneni - ukwelashwa
Izimpawu ze-adenoids ezinganeni
I-autism ye-Atypical ezinganeni
Ukuphuza okusajingijolo ku-vodka
Chastushki mayelana neShrovetide yezingane
INkosana uHarry yamema uMegan Markle ukuba ahlale naye eNtabeni yaseKensington
Amafritter on imvubelo
I-Skiathlon - kuyini ukuhamba ngezindiza ezingenqamuki?
I-Sansevieria - ukunakekela ekhaya
Imiphi imikhiqizo eningi ye-potassium?
Pouf transformer ngombhede
Iodine for izitshalo engadini
Ukukhulelwa amasonto angu-29 - ukuthuthukiswa kwe-fetus
Kungakanani ukulungiselela ukuhlolwa?
Amaphiko abhaka kuhhavini
Ijacket ye-Fur eyenziwe nge-fox
U-Rose McGowan uhlukanisa nomyeni wakhe ngemuva kweminyaka emibili yobuhlobo bomndeni
Izigqoko zokuphothula izifundo ngo-2014
I-Tukums - izivakashi ezikhangayo
Indlela yokuhlanganisa shawl?